आज मुस्लिम समुदायको ईद पर्व मनाईदै | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
आज मुस्लिम समुदायको ईद पर्व मनाईदै
प्रकाशित मिति २ असार २०७५, शनिबार ०७:५२ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । शनिवार संसारभरका मुस्लिम समुदाय इद अल–फित्र पर्व मनाएर पवित्र रमजान महिनाको अन्त्य गर्दैछन् ।
महिनाभरको कठिन ब्रत पछि मिष्टान्न भोजन गरी पर्वको अन्त्य गरिन्छ । मुस्लिम समुदायका ईदुल फित्र अरबी पात्रोको नवौं महिना रमजानका २९ वा ३० दिन रोजा राखेको खुसियालीमा मनाइन्छ । नेपालमा वसोवास गर्ने मुस्लिम समुदायले आज इद अल फितर धूमधामका साथ मनाउँदैछन् ।
हिजरिसम्वत् अनुसार उदर्भ महिनामा १ महिनासम्म मनाइने यो प्रमुख चाड हो । एक महिनासम्म सुर्य अस्ताउन्जेल पूर्णरुप उपवास (व्रत) बस्ने र अर्को महिनाको शुरूको दिन चन्द्रमाको दर्शन गरेपछी खाने चलन छ । आजका दिन नव वर्षको शुभकामना स्वरूप इद मुवारकको आदानप्रदान गरिन्छ ।
ईदको दिनमा बिहानै स्नानगरी नयाँ कपडा लगाउँछन् । रमजानको ईदमा नमाजका लागि जानुभन्दा अधि गरीब, असहाय वा मदरसाहरूलाई दान दिने चलन रहेको छ् । नेपालमा मुस्लिम समुदायका प्रत्येक व्यक्तिलाई रु. ५५ सद्का–ए–फित्र निर्धारण गरिएको छ ।
हजरत मुहम्मदको स्वीकृतिले मनाउँदै आएको यस चाडमा गरीब गुरूवाहरूको पनि सहभागी बन्न सकुन् भनेर धनीहरूले आफ्नो संचित धनको २.५ प्रतिशत हिस्सा गरिबहरूलाई फित्रा (दान) गर्नु पर्ने नियम रहेको छ ।
विप्लव समूहका मकवानपुर इञ्चार्ज ज्वाला पक्राउ
हेटौंडा । विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का मकवानपुर इञ्चार्ज वीरबहादुर घलान (ज्वाला) सहित २ जनालाई प्रहरीले…
रायपुर । भारतको छत्तीसगढमा मतदानको सुरक्षार्थ करिब एक लाख सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको समाचार छ । सोमबारको सो मतदानका लागि…
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बजेट रु ४५ अर्ब
काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले आव २०७५/७६ का लागि कूल रु ४५ अर्ब १७ करोड ५६…
कम्युनिस्ट सरकारको अर्को उपहार, फोन-इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि !
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारका कारण टेलिकम कम्पनीहरूले भ्वाइस, इन्टरनेटलगायतको शुल्क बढाउने भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै दूरसञ्चार…
बिरामीले नबुझ्ने प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने डाक्टरलाई कारबाही
काठमाडौं । बिरामीको पुर्जामा चिकित्सकले लेख्दा औषधिको सिफारिस (प्रेस्क्रिप्सन) नबुझेको गुनासो बढ्न थालेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बुझिने अक्षर र…
रामेछाप । राणाविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सहिद गंगालाल श्रेष्ठ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको सम्झनामा रामेछापमा स्मृति…
अश्लील भिडियो भाइरल भएका नायिकाहरु, हेर्नुहोस नामावलीसहित6views